Ukuqeqesha - Inja Yomhlaba | Izinja Umhlaba (Ikhasi 2)
Ungayifundisa kanjani inja yakho ukulandelela
Ungayifundisa kanjani inja yakho ukulandelela? Uma ufuna ukuthi ubomvu bakho bufunde ukukwenza, ngena sizokutshela ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukuze uzuze.
Kuyini ukushicilela futhi kungani kubalulekile empilweni yenja
Uyazi ukuthi yini imprinta futhi kungani ibalulekile empilweni yenja? Faka bese uthola ukuthi kusho ukuthini nokuthi kungani kukuhle ukukwenza!
Ungayivimbela kanjani inja ukukhonkotha ebusuku?
Ungayivimbela kanjani inja ukukhonkotha ebusuku? Uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukuze isilwane sijabule futhi singakhonkothi, ngena.
Ungayiqeqesha kanjani inja
Ngabe ufuna ukufundisa umdlwane wakho kusukela ebuncaneni kepha ungazi ukuthi uzoqala ngaphi? Ngena uthole.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iyiphi indlela engcono yokuqeqesha inja ngoba iwumdlwane? Ngena uthole.
Imikhuba emibi yenja nokuthi ungayilungisa kanjani
Kwesinye isikhathi izinja zithola isimilo esibi esibeka ngokuqinile usuku nosuku. Sikhuluma ngemikhuba emibi ejwayelekile nezisombululo ezingaba khona.
Yini i-ethologist futhi kungani ingaba lusizo kithi?
Ukwazi umsebenzi we-ethologist, futhi ikakhulukazi owe-veterologist ethologist kungasisiza uma kukhulunywa ngokuqonda ukusetshenziswa kwaso nezilwane.
Ukuqiniswa okuhle ezinjeni
Ngabe ufuna ukuqeqesha inja yakho kepha awazi ukuthi ungayenza kanjani? Uke wezwa ngokuqiniswa okuhle? Ngena uthole.
Ukuziphatha kokugibela ezinjeni
Ukuziphatha kwentaba enjeni kuzungezwe izinganekwane. Ngokuphikisana nenkolelo evamile, ayihlangene nezocansi, kepha futhi ingashukunyiswa ezinye izinto.
Inja yami ikhonkotha kakhulu, kufanele ngenzeni?
Ingabe inja yakho ikhonkotha kakhulu? Kubalulekile ukwazi ukuthi zingaba yini izimbangela zokukhonkotha ngokweqile ukuze ukuqonde futhi wenze ngendlela ephumelela kakhulu. Siyakuchazela!
Ukuziphatha ngolaka enjeni: okufanele ukwenze
Ukuziphatha ngolaka enjeni, nabantu abangajwayelekile noma izilwane, kufanele kubhekwane nakho ngokushesha ukuze inkinga ingakhuli. Sikhulume nochwepheshe we-Animal Ethology futhi usinikeze izeluleko ezilusizo kakhulu.
Ukuhamba kokuqala: amathiphu
Ukuhamba kwansuku zonke kubalulekile ekunakekeleni inja, ngoba ngayo ifunda ukuphatha amandla ayo, ibhalansise ingqondo yayo nokuqinisa umzimba wayo.
Izinzuzo / ukungalungi nezinhlobo zekhola elwa namagxolo
Ngabe inja yakho ikhonkotha kakhulu futhi bakutshele ngamakhola we-anti-bark futhi awazi kakhulu ukuthi imayelana nani? Faka futhi wazi izinhlobo ezikhona nobuhle / okungalungile.
Yini okufanele uyenze ukuze inja yami ingilandele
Yini okufanele uyenze ukwenza inja yami ingilandele? Uma ufuna ukuthola umngani wakho omkhulu afunde ukukulandela, unganqikazi: landela izeluleko zethu futhi uzophumelela nakanjani.
Yini okufanele uyenze nenja elumayo
Yini okufanele uyenze nenja elumayo? Kulezi zimo sivame ukuthukuthela kakhulu, kepha uma sifuna ukuthi kungaphindi kwenzeke, kufanele senze ngokuhlukile. Ukungena.
Ungayinqanda kanjani inja ukuthi ingakhonkothi komakhelwane
Ukukhonkotha kungenye yezizathu ezivame kakhulu zezingxabano phakathi komakhelwane. Sizokugwema uma sikwazi ukufundisa isilwane sethu ukuthi sisabele buthule ngokudlula komakhelwane abaseduze nomnyango wethu.
Amaphutha ezinja akufanele neze siwenze
Kukho konke ukuphila kwethu, senza amaphutha amaningi nezinja okuthi uma singazisebenzisi maduzane, zizogcina sezingumkhuba ongaguquki. Funda ukuthi ungakwenza kanjani kulesi sihloko!
Uma kukhulunywa ngokufundisa inja, ukuqiniswa okuhle kungenye yezindlela ezinhle kakhulu ezikhona, ngoba kudala inja elinganiselayo nenempilo.
Izizathu ezinhle zokuqeqesha inja yakho
Hlala phansi! Ngaphansi! Sukuma! Nginike isidladla! Futhi yize ukufundisa inja yakho le miyalo ehlukile akuyona into elula ...
Ungakuthola kanjani ukuhlala okuhle phakathi kwezinja namakati?
Izinja namakati akudingeki zizwane uma wazi ukuthi yini okufanele uyenze ukudala ukuhlangana okuhle phakathi kwazo. Lo mbhalo uchaza ukuthi ungakwenza kanjani! Vimbela inkulumo ethi "njengenja nekati" ukuthi igcwaliseke futhi ubenze babe abangane abangenakuhlukaniswa.
Ungayivimba kanjani inja ekumakeni endlini
Ukuvimbela inja ekumakeni ngaphakathi kwendlu kungenzeka, noma kunjalo kufanele sicabangele imihlahlandlela ethile futhi ngaphezu kwakho konke ukuyithatha ngesineke.
Ungayimisa kanjani impi yenja
Esinye sezimo esinzima kakhulu esingabhekana naso njengabaphathi bezinja yimpi phakathi kwabo. Singayimisa ngamaqhinga athile.
Ungayivimba kanjani inja ekulume?
Ungayivimba kanjani inja ekulume? Uma ufuna umngane wakho akhule ejabule, ngaphandle kokudala izinkinga, ngena sizokutshela okufanele ukwenze ukuze ukuthole.
Yini okufanele uyenze nenja ebalekile?
Ngabe inja yakho iyi-escapist yangempela futhi lapho ungakulindelanga, ibaleka ingabheki emuva? Bheka amathiphu ethu.
Qonda futhi uvimbele ukulwa kwenja
Ukhiye wokugwema noma yikuphi ukulwa kufanele unake kakhulu izinga lentokozo etholwa ngumdlalo. Ngakho-ke ngena ngaphakathi bese uthola ukuthi ungayilungisa kanjani.
Indlela enhle yokuhamba inja ongayazi
Sikunikeza uchungechunge lwamathiphu ukuze uhambe uhambe nenja kuyinto enhle. Ngena uthole.
Yimaphi amaphutha enzeka lapho kuqeqeshwa inja?
Yimaphi amaphutha enzeka lapho kuqeqeshwa inja? Uma ufuna ukuqeqesha umngani wakho, ngena uthole ukuthi yini okufanele uyigweme.
Ungayifundisa kanjani inja ukuwela umgwaqo?
Ungayifundisa kanjani inja ukuwela umgwaqo? Uma uhlala edolobheni noma edolobheni kubalulekile ukuthi ufunde ukuthi ungakwenza kanjani. Faka futhi sizochaza ukuthi singakufinyelela kanjani.
Yini indlela yomhlambi?
Uyazi ukuthi indlela yomhlambi iqukethe ini? Faka futhi sizoxazulula ukungabaza kwakho. Thola ukuthi kungani kungaba yindlela enhle yokuqeqesha.
Ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi kubantu?
Sikutshela ukuthi ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi kubantu ukuze ibe yisilwane esijabule futhi esizolile. Faka bese uthola ukuthi ungayithola kanjani.
Kungani kubalulekile ukunikeza inja ukuphatha?
Sikutshela ukubaluleka kwemiklomelo ekufundiseni nasekuqeqesheni inja. Ngena uthole ukuthi yikuphi okuhle kakhulu nokuthi kufanele ubanikeze nini.
Fundisa inja yakho ukuphenduka
Ngabe ufuna inja yakho ifunde amaqhinga ayisisekelo njengokujika kwesokudla noma ukujikela kwesobunxele? Faka bese ulandela iseluleko sethu.
Kuyini ukukhukhula noma inqubo yezikhukhula?
Sikutshela ukuthi iyiphi inqubo yezikhukhula nokuthi iqukethe ini, indlela yokuqeqeshwa kwezinja engenza umonakalo omkhulu ezinjeni.
Ukufundisa inja ngokuqinisa okuhle
Ukuqiniswa okuhle kuyindlela enhle kakhulu yokufundisa isilwane sethu, ngoba sinezinzuzo eziningi futhi sisebenza kahle kakhulu.
Ungayiqeqesha kanjani inja engezwa
Ingabe inja yakho iyisithulu futhi ayiziphenduli izingcingo zakho? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungaqeqesha kanjani inja eyisithulu ngendlela elula? Ngena uthole.
Amathiphu wokuba ngumqeqeshi oqeqeshiwe
Umqeqeshi oqeqeshiwe ngumsebenzi obalulekile futhi ohlonishwayo emakethe yezabasebenzi. Ngalokhu kufanele sibheje ngokuqeqeshwa kwekhwalithi.
Ukuziphatha okungafani nomphakathi ezinjeni: ungaziphatha kanjani
Ukuziphatha okungafaneleki kwezinja ezinjeni kungaba nemvelaphi yazo ngezimbangela ezahlukahlukene, ngokuya ngokuthi kufanele siziphathe ngandlela thile.
Ungayifundisa kanjani inja ukuya kusayithi lakho
Ungathanda ukwazi ukuthi ungayifundisa kanjani inja ukuthi iye engosini yakho? Yiba nesineke njalo, okunye esikufundisa kona. Ukungena!
Izimpawu zokubusa enjeni
Inja ngayinye inokuthambekela kwemvelo ekuthobeleni noma ekubuseni, okuthi, lapho kudlulelwa ngokweqile, kungaholela ezinkingeni ezithile zokuziphatha.
Ngicabanga ukuthi ungayenza kanjani inja yakho idle
Ngezizathu ezahlukahlukene, izinja kwesinye isikhathi ziyakwenqaba ukudla. Lapho izimbangela zomzimba sezikhishiwe, singasebenzisa amaqhinga ambalwa ukuxazulula inkinga.
Ungayifundisa kanjani iCa de Bestiar noma iMallorcan Shepherd
Ngabe usanda kuthola noma wamukela iMallorcan Shepherd? Uma kunjalo, ngena bese uthola ukuthi ungamfundisa kanjani uCa de Bestiar ukumjabulisa.
Fundisa inja yakho uku-oda etafuleni
Ukucela ukudla etafuleni kuwumkhuba ojwayelekile enjeni futhi kungaba yinkinga uma singayilawuli. Singakwenza ngamasu ambalwa.
Yini okufanele uyazi ngokuqeqeshwa kwezinja?
Amakilasi asisiza ukuba sisondele esilwaneni sethu futhi sifunde ukuthi kufanele siziphathe kanjani nokuthi siziphathe kanjani nazo, lokhu kuyinzuzo njalo.
Ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingahlafune izitshalo
Ngabe umngani wakho uyamosha amabhodwe? Faka sizokutshela ukuthi ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingazilumi izitshalo ngendlela elula.
Ngabe umngani wakho ulahlekelwe ukuzwa? Ungakhathazeki: sichaza ukuthi ingayiqeqeshwa kanjani inja eyisithulu. Uzobona ukuthi kulula kanjani ukumfundisa. Ukungena.
Umdlwane wami awufuni ukulala embhedeni wakhe, ngenzenjani?
Ukufundisa inja ukulala embhedeni wayo kungaba nzima, ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Singakwenza ngokubekezela namasu ambalwa.
Ungayelapha kanjani ukwesaba udokotela wezilwane
Ukwesaba udokotela wezilwane kuvamile ezinjeni. Singayilungisa ngokulandela amanye amathiphu, njengokuhlala uzolile noma ukusebenzisa ukuqinisa okuhle.
Ukuqeqesha umalusi waseBelgian Malinois
Izinja zohlobo lweBelgian Shepherd Malinois zohlobo olukhethwayo uma kukhulunywa ngokuba "yizinja ezinkulu" futhi lokhu kungenxa yamakhono abo amakhulu
Siza inja yakho ukubhekana nokuhamba
Ukuhamba kunengcindezi kuwo wonke umndeni, kufaka phakathi inja yethu. Ngamaqhinga ambalwa singenza ushintsho lube lula kuye.
Ungayifundisa kanjani inja eflethini
Ngabe usanda kwamukela eyodwa enoboya? Uma kunjalo, ngena uthole ukuthi ungayifundisa kanjani inja eflethini ukuze yazi ukuthi kufanele iziphathe kahle kanjani.
Ungayiqeqesha kanjani iDoberman
Ngabe usanda kuthola uboya balolu hlobo? Uma ufuna ukuba noboya obuqeqeshwe kahle, ngena sizokutshela ukuthi uyiqeqesha kanjani iDoberman.
Ungayiqeqesha kanjani inja yami ukuthi ingadonsi leash
Ukuhamba noboya kufanele kube mnandi kini nobabili. Uma ufuna kube njalo, unganqikazi bese ungena ukuthola ukuthi ungayilolonga kanjani inja yami ukuze ingadonsi ibhande.
Izinganekwane namaqiniso lapho kufundiswa izinja ngendlela enhle
Uma sifuna inja yethu isihloniphe futhi isilalele, kufanele siqine, ukuze isibonise inhlonipho encane lapho siyifundisa.
Baqeqesha izinja ukuthola i-gluten ekudleni
Ukuqeqeshwa okutholwa yilezi zinja kuyefana nokwanikezwa izinja zamaphoyisa ukuze zikwazi ukuthola izidakamizwa ezahlukahlukene.
Ungayinciphisa kanjani ukukhonkotha kwenja ngokweqile?
Indlela elula yokwehlisa ukukhonkotha ukuqasha umqeqeshi wezinja oqeqeshiwe ozobheka isisombululo esimnene nokuqeqeshwa okusebenzayo.
Ungayiqeqesha kanjani iChihuahua
Sikunikeza okhiye bokuba noboya obunemilenze emincane kodwa obunobungane. Faka ukuze wazi ukuthi ungaqeqesha kanjani i-Chihuahua.
Ungayifundisa kanjani inja ukuhamba ngaphandle kokudonsa ibhande
Omunye wemisebenzi esemqoka eyenziwa ngabanikazi bezinja nezilwane zabo zasekhaya ukuhambahamba, ngakho-ke qaphela ukuthi ungavumeli inja yakho idonse.
Umdlwane kufanele uzihlanganise nabantu nezinye izilwane ezifuywayo ezinyangeni zawo zokuqala, into ezosiza ukwakha isimilo sayo.
Ukufundisa umdlwane ukuya endlini yangasese
Kuthatha ukubekezela ukufundisa inja yakho ukuthi ichame futhi ichofoze endaweni efanele, ngakho-ke landela lezi zinyathelo ezingezansi.
Ukufundisa inja ngaphandle kokujeziswa
Lapho uqeqesha inja, kunezindlela eziningi zokubeka imingcele futhi ucacise ukuthi iziphi izindlela zokuziphatha ezingamukeleki. Bazi !!
Amathiphu wokuvimba inja ekumbeni ingadi
Ingabe inja yakho iyathanda ukwenza izimbobo engadini? Ungakhathazeki, sikunikeza amathiphu amaningana angasiza kakhulu lapho uxazulula le nkinga.
Kungani inja yami igquma?
Ukugquma kuyisixwayiso sokuthi okuthile okuzungeze inja akulungile noma akuthandi, ngakho-ke kubalulekile ukunaka.
Ukuziphatha okulimazayo kwezinja
Ungakugwema kanjani ukuziphatha okonakalisayo ezinjeni kalula, ngokwemvelo futhi okuhle kunakho konke, ukuqonda ukuthi kungani iziphatha kanjena.
Fundisa inja ukubuyisa ibhola
Thola ukuthi ungayifundisa kanjani inja ukubuyisa ibhola lapho sidlala nayo. Isenzo esingafundwa yizo zonke izinja ngezinyathelo ezilula.
Izinzuzo zokudlala nenja
Ukudlala nenja yakho akunalutho ngaphandle kwezinzuzo nezinzuzo zombili umnikazi nenja, lokhu okugcina kungukufundela umsebenzi empilweni yakhe.
Ungayivimba kanjani inja yami ekuhlaseleni izinkukhu
Okunye ukungabaza okuvame kakhulu kwalabo abahlala emapulazini yindlela yokuvimbela inja yami ekuhlaseleni izinkukhu. Ngalezi zeluleko uzokufeza ngokuqinisekile.
Uqeqesha kanjani umdlwane
Ngabe usuqalile ukuhlala nenja enoboya futhi udinga ukwazi ukuthi uqeqesha kanjani umdlwane? Uma kunjalo, nansi inkomba ezosiza kakhulu ukukufundisa.
Ungayifundisa kanjani inja yami ukulanda ibhola
Umdlalo webhola umnandi kakhulu, kepha akulula ukuthi bawudedele. Uma kunjalo, ngena uthole ukuthi ungayifundisa kanjani inja yami ukulanda ibhola.
Ngiyihamba kanjani inja yami
Sikunikeza uchungechunge lwezeluleko ukuze ukuphuma uhambe nomngane wakho kuhle. Faka bese uthola ukuthi ungayihamba kanjani inja yami.
Inja engahlangene kahle ingaba yingozi enkulu
Zazi izizathu zokuthi kungani kufanele uqeqeshe inja yakho ngoba iwumdlwane, ngoba uma ihlasela othile kuwumsebenzi wakho.
Ungayiqeqesha kanjani i-pitbull
Sichaza ukuthi siyiqeqesha kanjani iPitbulll, enye yezinja ezinothando kakhulu emhlabeni we-canine. Thola inja elinganiselayo ngokulandela izeluleko zethu.
Ungayifundisa kanjani inja ukuhlala
Ungathanda ukwazi ukuthi ungayifundisa kanjani inja yami ukuhlala? Uma kunjalo, ngena ubone ukuthi kulula kangakanani. Thola ubomvu bakho buhlale njalo lapho ubuza.
Ngingayenza kanjani inja yami iyeke ukuchama endlini
Ukwenza ukuthi inja yami iyeke ukuchama ngaphakathi endlini kungenye yezinto eziseqhulwini zawo wonke umuntu owamukela inja. Lapha ngikutshela ukuthi ukwenze kanjani ...
Kungani inja yami izikhulula ekhaya?
Kungani inja yami izikhulula ekhaya? Ungomunye wemibuzo amakhasimende ami angibuza wona kakhulu. Nayi impendulo yami ...
Ungayethula kanjani kahle inja nonogwaja
Ukuhlalisana phakathi kwenja nonogwaja akulula ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthatha izinyathelo ezithile lapho uzethula.
Izindlela zokuqeda ukukhathazeka ngokwehlukana
Ukukhathazeka ngokwehlukana kungenye yezinkinga zenja ezivame kakhulu. Ukuyixazulula sizodinga ukubekezela namanye amaqhinga.
Ungakujwayeza kanjani ukuzola enjeni
Izinja ezinovalo noma ezikhathazayo kufanele zijwayeze ukuzola osukwini lwazo nosuku, futhi yithina esingabasiza ngalokhu.
Ungayisebenzisa kanjani imfundo enhle nenja
Imfundo evumayo inconywa kakhulu futhi isebenza kahle enjeni, imvuza ngalokho akwenzayo kahle, nangaphandle kokuyithethisa.
Ungayiqeqesha kanjani iLabrador
ILabrador yinja ethanda ukuzijabulisa ethanda izingane, kepha idinga ukufundiswa imithetho ethile. Faka bese uthola ukuthi ungaqeqesha kanjani iLabrador.
Ungayenza kanjani inja ifunde ukuhamba phezu kwe-leash
Thola ukuthi ungayenza kanjani inja ukuthi ifunde ukuhamba phezu kwe-leash, ukuze bazijabulise nalesi sipiliyoni nsuku zonke emgwaqweni.
Izingane nezinja: amathiphu okuhlalisana okuhle
Izingane nezinja zingaba abangane abakhulu. Kumele sifeze uchungechunge lweziqondiso ukugwema noma iyiphi inkinga engaba khona.
Vimbela inja ekuhlafuneni izicathulo zakho nezinto zakho
Ukuvimbela inja ekuhlafuneni ezintweni zakho kuyisisekelo sokuhlalisana okuhle, futhi kunemihlahlandlela ethile ukuze lokhu kungenzeki kunoma yikuphi.
Ungayivimba kanjani inja yami ekuhlaseleni ezinye izinja
Ungathanda ukwazi ukuthi ungayivimbela kanjani inja yami ekuhlaseleni ezinye izinja? Uma kunjalo, ngena uzokwazi okufanele ukwenze ukugwema lesi simo esingesihle.
Ungakuphatha kanjani ukuzethemba ngokweqile enjeni yakho
Ukuncika ngokweqile enjeni kuholela ezinkingeni ezinjengokukhathazeka ngokwehlukana noma ulaka. Ngenhlanhla, kunezindlela zokwelapha.
Ungayifundisa kanjani injana ukuzikhulula emgwaqweni
Ukwenza inja yethu ifunde ukuzikhulula emgwaqeni kuzodingeka silandele amaqhinga athile, ngaso sonke isikhathi sisebenzisa ukuqiniswa okuhle.
Ungayivimba kanjani umdlwane ekulumeni
Sikutshela ukuthi ungawuvimbela kanjani umdlwane ekulumeni, ngeqhinga elilula elizokumangaza nakanjani. Ngena ngaphakathi uvimbele uboya bakho ekuhlafuneni izinto okungafanele azenze.
Inja yakho idlula ezigabeni ezihlukile: yondle ngendlela enhle #ultimaWe changeTogether
Inja yakho izodlula ezigabeni ezahlukene kuyo yonke impilo yayo. Ukuze ajabule, umphakele ngendlela engcono kakhulu.
Amathiphu enja yakho ukukulalela
Ngabe usanda kuletha ikhaya elinoboya futhi ungathanda ukwazi ukuthi ungaliqeqesha kanjani? Faka sizokutshela amathiphu ambalwa wenja yakho ukuthi ikulalele.
Ungayifundisa kanjani inja ukushaya
Ngabe ungathanda ukwazi ukuthi ungayifundisa kanjani inja ukuba idlale? Faka sizokutshela, igxathu negxathu, ukuthi yini okufanele uyenze ukuze ufunde i-oda.
Yimaphi amaphutha ajwayelekile lapho uqeqesha inja
Sikutshela ukuthi yimaphi amaphutha ajwayelekile lapho uqeqesha inja. Ngena ufunde ukuthi ungazigwema kanjani nokuthi ungajabulisa kanjani umngani wakho.
Ungaqeqesha kanjani umdlwane wami ukuthi ungalumi
Izinja ezisencane zithanda ukuhlafuna yonke into, kepha kwesinye isikhathi zihlafuna izinto ezingafanele. Ngena sizokutshela ukuthi uwuqeqesha kanjani umdlwane wami ukuze ungalumi.
Ungayithethisa kanjani inja ngendlela efanele
Ukuthethisa inja yethu kuwumsebenzi obucayi. Kufanele sikwenze ngendlela efanele, ngaphandle kwalokho singalimaza ukuzethemba kwakho.
Ingozi yokuphuza ngokweqile inja yethu
Ukunikeza inja yethu ngokweqile kungaba yingozi kuyo, ngoba kungadala ukungazethembi nezinye izinkinga zokuziphatha.
Okufanele ukwenze uma inja yami yesaba abantu
Ungathanda ukwazi ukuthi yini okufanele uyenze uma inja yami yesaba abantu? Sizokusiza. Ngena ukuze aphile impilo ejabulisayo futhi.
Ungayimisa kanjani inja yakho ukukhonkotha
Ngabe unayo inja enemilenze emine enoboya futhi uyazibuza ukuthi ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi? Faka futhi uqaphele izeluleko zethu.
Ungazethula kanjani izinja ezimbili
Ngabe uhlela ukuba noboya obusha kodwa ngabe ukhathazekile ngosuku lokuqala? Ngena sizokutshela ukuthi ungenisa kanjani izinja ezimbili, uphefumule kalula.
Ungayiqeqesha kanjani iDalmatia
Ungathanda ukuqala ukuhlala nenja kepha ungazi ukuthi ungayiqeqesha kanjani iDalmatia? Ngena sizokunikeza okhiye bokwenza inja ijabule eceleni kwakho.
Ungayivimba kanjani inja yami ekuhlaseleni amakati
Ingabe umngane wakho unovalo futhi uxosha amakati? Uzibuza ukuthi ngivimbela kanjani inja yami ekuhlaseleni amakati? Menze ayeke ukukwenza ngalezi zindlela zobuqili.
Ungayimisa kanjani inja yami ekuhlafunweni ezintweni zami
Ungayivimba kanjani inja yami ekuhlafunweni ezintweni zami. Uzibuze kangaki lokhu? Abaningi, akunjalo? Faka sizokweluleka.
Ungayiphatha kanjani inja yakho
Sichaza indlela yokuqondisa inja yakho, ngamathiphu azosiza kakhulu ukuqinisekisa ukuthi umngani wakho uhlala ngokujabula iminyaka eminingi eceleni kwakho.
Ungayiqeqesha kanjani inja yakho ichame
Ungathanda ukwazi ukuthi ungayiqeqesha kanjani inja ichame? Sikutshela okufanele ukwenze ukuze umngani wakho akwazi ukuzikhulula lapho ufuna khona.
Ungayivimba kanjani inja yami ekufuneni ukudla lapho ngidla
Wake wazibuza ukuthi ungamisa kanjani inja yami ekufuneni ukudla lapho ngidla? Ngena sizokusiza wenze umngani wakho aziphathe kahle.
Ungayifundisa kanjani inja ukuthi ihlale inganyakazi
Thola ukuthi ungayifundisa kanjani inja yakho imiyalo eyisisekelo yokuhlala unganyakazi. Indlela yokuthi bafunde ukuziphatha ezimweni ezahlukahlukene.
Ungayenza kanjani inja ifunde igama layo
Ngabe uhlala noboya okokuqala futhi ungathanda ukwazi ukuthi ungayenza kanjani inja ifunde igama layo? Faka futhi sizochaza ukuthi sikuthola kanjani.
Uzithola kanjani izinja ezimbili ukuze zizwane
Kunezindlela namathiphu okwenza izinja ezimbili zizwane uma sifuna ukwethula ilungu elisha emndenini wethu.
Ungayifundisa kanjani inja yami ukulala phansi
Ungathanda ukwazi ukuthi ungayifundisa kanjani inja yami ukulala phansi? Lo myalo ungasiza kakhulu ekhaya. Faka bese uthola ukuthi ungakwenza kanjani ngempumelelo.
Amathiphu okufundisa inja ukulala yodwa
Ukufundisa inja yethu ukulala embhedeni wayo kungaba nzima. Ukungaguquguquki nokubekezela kubalulekile ukufeza lokhu.
Uzoqala nini ukuqeqesha inja
Awuqinisekile ukuthi uzoqala nini ukuqeqesha inja? Kunenkolelo yokuthi kufanele ukwenze ngemuva kwezinyanga eziyi-6, kodwa ngabe lokho kuyiqiniso? Ngena sizokutshela.
Indlela yokwenza abangane bakho bezinja nezikati
Kuthiwa inja nekati bayizitha zemvelo, kepha akukho okungaba kude neqiniso. Konke kuncike kubuntu babo nemfundo abayitholile.
Ungayihamba kanjani injana
Zonke izinja zithanda ukuphuma ziyobona umhlaba, kepha kuthiwani ngomncane kunabo bonke? Faka bese uthola ukuthi ungahamba kanjani umdlwane ngokuphepha.
Ungayivimba kanjani inja yami ukuba ingaphunyuki
Ngabe inja yakho ishiya indlu kakhulu futhi ukhathazekile ukuthi ngeke isabuya? Ngena sizokunikeza uchungechunge lwamathiphu wokuthi ungayivimbela kanjani inja yami ukuba ingaphunyuki.
Amaqhinga okuthi inja ize ocingweni
Ukwenza inja ize ocingweni kungenye yezinto ezinzima kakhulu esibhekana nazo ...
Ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingadli udoti
Izinja kwesinye isikhathi zisebenza ngendlela engafanele, okungaba yingozi empilweni yazo. Ngena sizokutshela ukuthi uvimbela kanjani inja yami ekudleni udoti.
Izikhiye zokugwema isithukuthezi enjeni
Ukugwema isithukuthezi enjeni yethu kuzodingeka sinikele isikhathi esithile kuso usuku ngalunye, sinikeze ukuhamba okude nomthamo omuhle wokuzijabulisa.
Ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami
Kule ndatshana, ngiphakamisa izimo ezimele imithombo yengcindezi yezinja zethu nokuthi kufanele sigweme ngazo zonke izindlela ...
Ungamqeqesha kanjani uMalusi waseJalimane
Ngabe uyaqala ukuhlala nenye yalezi zilwane ezinhle futhi ungazi ukuthi uqeqesha kanjani umalusi waseJalimane? Ake sikufundise. Ukungena.
Ungayithethisa kanjani inja yami
Impela wake wazibuza ukuthi ungayithethisa kanjani inja yami, akunjalo? Ngena uqaphele lawa macebiso ukuze ufundise umngane wakho omkhulu onoboya.
Ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingagxili kubantu
Ngabe ubomvu bakho bujabula kakhulu njalo uma unezivakashi? Faka ukuze ufunde ukuthi ungayivimbela kanjani inja yami ukuthi igxumele abantu. Kulula kakhulu. Thola.
Ungayinaka kanjani inja yakho
Awuqinisekile ukuthi ungayinaka kanjani inja yakho? Ungakhathazeki, sizokufundisa. Faka bese ulandela lezi zinyathelo ukuze inja ikunake.
I-clicker iyithuluzi lokuqeqesha i-canine elikhipha umsindo othambile, okufanele inja iwuhlobanise nesikhuthazo esihle.
Ukubona ukuluma kwakho okunomlilo omunye noma umuntu akumnandi neze. Ukugwema lokhu, sichaza ukuthi singayifundisa kanjani inja ukuthi ingaluma.
Ukuzijabulisa, ukhiye wenja elinganiselayo
Ukuhlalisana nabantu kungukhiye wenja ukuthi ilinganise futhi yazi ukuthi kufanele ibhekane kanjani nabanye abantu nezilwane.
Ungayivimbela kanjani inja yami ekubeni nolaka
Awazi ukuthi ungayivimbela kanjani inja yami ekubeni nolaka? Sixazulula ukungabaza kwakho futhi, ngaphezu kwalokho, sikutshela ukuthi kungani kunezinja eziziphatha ngaleyo ndlela. Ukungena.
Amaphutha ajwayelekile ekunakekelweni kwezinja
Ukuhamba kancane, ukukhetha okuphakelayo okungalungile noma ukuhlangana ngokwanele ngamanye amaphutha ajwayelekile lapho ufundisa futhi unakekela inja.
Amathiphu okujabulela ukuhamba nenja yakho
Izinzuzo ezilethwa ukuhamba kwansuku zonke enjeni ziba namandla kakhulu lapho sijabulela nazo. Kukhona okhiye kulokhu.
Ububhalo, ezemidlalo nokufunda isilwane sakho
Impela umdlalo we-Agility ujwayelekile kuwe, nokuthi uke wawubona ngesikhathi esithile. Kumayelana…
Ungayivimba kanjani inja ekuhlafuneni ifenisha yethu
Kwesinye isikhathi izinja zehlisa ukukhathazeka ngokuhlafuna ezintweni zethu, njengefenisha. Kuyadingeka ukwazi imvelaphi yenkinga ukuze ukwazi ukuyixazulula.
Ukulutha kwebhola ezinjeni: ungayiphatha kanjani
Ukudlala ukuphonsa ibhola enjeni yethu kungukuzivocavoca okunconywayo inqobo nje uma kungabi yinto ayithandayo. Sikufundisa ukuthi ungakugwema kanjani.
Yini okufanele uyenze uma umdlwane wami uqala ukungiluma
Vimbela inja yakho ukuthi ingakulumi ngalezi zeluleko futhi ufunde ukuthi kungani isilwane sakho sisebenzisa umlomo waso ukukualuma ngezinye izikhathi. Yini lokhu? Ungakugwema kanjani?
Ukuqaphela ukudla ezinjeni: kungani kunjalo?
Ukuthambekela kokudla enjeni kungaba ngenxa yezizathu eziningana, njengezinkinga zempilo, ukuntuleka kokuvivinya umzimba noma ukungabi namashejuli athile.
Izincwadi ezinhle kakhulu zokuqeqeshwa kwezinja
Ukuze sikwazi ukuqeqesha isilwane sethu kubalulekile ukuzazisa kahle ngezindlela ezinhle kakhulu. Izincwadi ezikhethekile ziyisetshenziswa esihle salokhu.
Ukufundisa ngezinga elingokomzwelo: Ingcindezi ebangelwa ngabantu II
Namuhla ngiqeda ngesihloko sokuthi sikubangela kanjani ukucindezeleka ezinjeni zethu. Ungaphuthelwa.
Ukuziphatha okuhle: ungayilungisa kanjani
Ezinye izinja zikhombisa ukuziphatha okuqondene nokudla kwazo, amathoyizi azo, noma abanikazi bazo. Singayilungisa ngokuqeqeshwa okufanele.
Yini okufanele uyenze uma inja yami ingafuni ukuhamba?
Kukhona izinja ezenqabayo ukuhamba ngenxa yokuhlangenwe nakho okubuhlungu nokunye ukwesaba. Ukuyixazulula sizodinga ukubekezela okukhulu nokuqiniswa okuhle.
Ungahamba kanjani izinja ezimbili ngasikhathi sinye
Ukuhamba izinja ezimbili ngasikhathi sinye kungaba nzima, kepha ngeziqondiso ezithile nokuzilolonga okuningi, ungakwenza.
Ungaba kanjani umholi wenja yakho ngezinyathelo ezi-4 ezilula
Yize kuliqiniso ukuthi inja yethu ingomunye womndeni, ayidingi uMaster, uBoss, uBaba noma uMama noma umngani. Udinga umholi.
Ulimi luyinto ebaluleke kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lweqembu labantu efuna ukuxoxa nganoma iyiphi indlela, luyisisekelo sokuxhumana
Ungayivimba kanjani inja ukuthi ingangeni kusofa
Uma inja yakho ingakulaleli, kufanele uyivimbele ukuthi ingangeni kusofa. Kunezindlela zokwenza ukuthi kungangeni kulesi sikhala.
Izizathu zokuthi kungani inja yakho ingakunaki
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani inja yakho ingakunaki, futhi kufanele uzibone ukuze uthole imfundo engcono.
Ungayiqeqesha kanjani inja ekhathazekile ngokudla
Thola imihlahlandlela yokufundisa inja ekhathazayo ngokudla.
Izeluleko ezisebenzayo zokufundisa umdlwane wakho imikhuba emihle
Ingabe ungomunye walabo abavalela inja yabo lapho kufika izivakashi? Lesi simo sinikeza isithombe esidala kakhulu kwabaningi ...
Amathiphu ngeShih Tzu mini
Izidingo zokuhlolwa kwe-Agility
Ukufunda ukuqeqesha iGiant Schnauzer yakho
Indlela yokufundisa izinja ezingazinzi
Kunezindlela ezithile zokuqeqesha inja engazinzi, enye yazo inqubo yokuqothulwa.
Ama-pheromones amakhemikhali abaluleke kakhulu ezilwaneni zethu, yikho okuwavumela ukuthi akhulume namalungu e ...
Amathiphu Kulabo Abanezifuyo Ezingalaleli
ICanophilia ngumsebenzi owenziwa ngabantu abathanda izinja ukuthuthukisa ikhwalithi yabo
Thuthukisa ubuhlakani benja yakho
Ukuthuthukisa ubuhlakani ngamathoyizi kungaba yinto enhle kakhulu kuye futhi kungavumela ubudlelwano obuhle ukuba bukhule phakathi kwakho.
Inja iyakhala ebusuku
Okululekwa yiwo wonke umuntu ukuthi izinja zilala endaweni yazo nokuthi kuyiphutha elikhulu ukuzivumela emidlwane ukuba izinze emibhedeni yethu.
Ungayivimbela kanjani inja ukuthi yeqe ngaphezulu? III
Amasu okuvimbela inja ukuthi igxume phezu kwabantu
Izinhlobo ezinkulu zezinja
Lolu hlobo lohlobo lubonakala ngokuba nomlingiswa oqinile futhi kwesinye isikhathi lukhombisa izimpawu ezethusayo zolaka.